Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa ATEM Mini Extreme | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Isgaarsiinta
Bogga ugu weyn » News » Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa ATEM Mini Extreme
Moodooyinka cusub ee awoodda badan ee ATEM Mini waxaa ka mid ah 8 gashiga, 6 DVEs,
4 keereyaasha chroma, 16 waddo multiview, 2 keith hoose, 2 ciyaartoyda warbaahinta iyo in ka badan!
Fremont, CA, USA - Arbaco, Febraayo 17, 2021 - Blackmagic Design maanta ayaa lagu dhawaaqay ATEM Mini Extreme, oo ah nooc cusub oo ballaaran oo ballaaran oo ah beddelkeenna wax soosaarka tooska ah ee ATEM Mini. Moodelkan cusub ayaa ah midkayaga ugu horumarsan 1 M / E switcher kaas oo ka kooban 8 gal, 4 ATEM Advanced Chroma Keyers, wadar ahaan 6 madax-bannaan oo loo yaqaan 'DVEs', 2 ciyaartoy warbaahineed, 2 keith-yada hoose, 16 waddo aragti-badan, 2 xiriir USB iyo tiro badan HDMI wax soo saar aux Waxa kale oo jira qaab cusub oo ah ATEM Mini Extreme ISO oo ay ku jiraan dhammaan astaamahan awoodda badan oo lagu daray mashiin duuba oo ka awood badan kaas oo duubi kara dhammaan wax soo saarka 8 oo lagu daray barnaamijka wadarta 9 durdur oo wax lagu duubo. Labada noocba waxaa ka mid ah mashiin wacyigelin tayo leh oo si toos ah ugu gudbinaya YouTube, Facebook, Twitter iyo wixii intaa ka sii badan.
ATEM Mini Extreme iyo ATEM Mini Extreme ISO ayaa isla markiiba laga heli karaa Blackmagic Design dib u soo iibiyaasha adduunka oo dhan laga bilaabo US $ 995.
ATEM Mini switchers waxay fududeynayaan in la abuuro wax soo saar badan oo kaamiro badan oo xirfadlayaal ah oo loogu talagalay socodka tooska ah ee YouTube iyo bandhigyada ganacsi ee hal abuurka leh iyadoo la adeegsanayo Skype ama Zoom. Si fudud ugu xir ATEM Mini macaamiishana waxay si toos ah ugu beddeli karaan gelitaanka 8 kaamiro fiidiyow oo tayo sare leh sawirro tayo sare leh oo si heer sare ah uga wanaagsan. Ama ku xir kombiyuutar bogagga PowerPoint ama qalabka ciyaarta. Dhismaha DVE wuxuu u oggolaanayaa sawirka xiisaha leh ee saameynta sawirka, oo ku habboon faallooyinka.
Waxaa jira xamuul badan oo saameyn fiidiyow ah sidoo kale. Dhamaan moodooyinka ATEM Mini waxay leeyihiin USB oo u shaqeeya sida kamarada webka si macaamiisha ay u isticmaali karaan softiweer kasta oo wax duuba halka ATEM Mini Pro iyo moodooyinka ATEM Mini Extreme ay ku darayaan qulqulka tooska ah iyo duubista cajaladaha USB. Waxaa sidoo kale jira HDMI u bixi mashruucyo. Waxyaabaha la soo qoro ee makarafoonku waxay u oggolaadaan majaajillo iyo mootooyin tayo sare leh wareysiyo iyo bandhigyo.
ATEM Mini's compact oo dhan hal naqshad waxaa ku jira labada guddi koontarool iyo sidoo kale isku xirnaanta. Qeybta hore waxaa ka mid ah fududahay in la isticmaalo badhannada xulashada ilaha, saamaynta fiidiyowga iyo kala-guurka. Badhamada ilaha waa weynyihiin sidaa darteed waa macquul in loo adeegsado dareemo, u oggolow soo-hayaha inuu beddelo. Macaamiisha xitaa waxay helayaan badhano loogu talagalay isku darka maqalka. On ATEM Mini Pro iyo moodellada macaamiisha ah sidoo kale waxay helayaan badhanno loogu talagalay duubista iyo xakamaynta socodka, iyo sidoo kale badhamada xulashada soosaarka oo u oggolaanaysa macaamiisha inay beddelaan soosaarka fiidiyowga ee u dhexeeya kamaradaha, barnaamijka iyo muuqaalka badan. Qeybta dambe waxaa ku yaal HDMI xariirrada kaamirooyinka ama kombiyuutaro, wax soo saarka dhegaha ee makarafoonka, USB maka webcam out iyo an HDMI Soosaarka "aux" ee fiidiyaha barnaamijka ah.
ATEM Mini Pro iyo moodellada ATEM Mini Extreme waxay ku dhisan yihiin mashiinka qalabka wax lagu duubo ee loogu talagalay qulqulka tooska ah iyagoo adeegsanaya xiriirkooda ethernet. Taasi waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ay si toos ah ugu noolaan karaan YouTube, Facebook iyo Twitch si ka tayo wanaagsan, iyagoon lahayn looxyo hoos u dhacaya iyo qaabab fudud. Kaliya dooro adeegga qulqulka oo geli furaha qulqulka. Waxaa jira waraaqo yar yar oo kujira xakamaynta softiweerka ATEM ee loogu talagalay dejinta dejinta, oo lagu daray xaalada qulqulka ayaa sidoo kale lagu muujiyey muuqaalka guud. Xaaladda socodka waa fududahay in la fahmo maaddaama tilmaanta heerka xogta ay muujineyso xawaaraha internet ee looga baahan yahay qaabka fiidiyowga isticmaalayaashu isticmaalayaan. Haddii isticmaaleyaashu ay maskax ahaan farsamo ahaan leeyihiin, macaamiisha ayaa cusbooneysiin kara astaamaha qulqulka ee faylalka 'XML file' si ay ugu rartaan adeegyo cusub.
Haddii adeegsadayaashu ay wax soo saar toos ah ku sameynayaan goobta markaa moodooyinka ATEM Mini Pro iyo Extreme waxay taageerayaan isku xirka taleefanka Apple ama Android ee dekedda USB si ay u adeegsadaan xogta moobiilka. Sidoo kale waa keyd weyn u ah isku xirka Ethernet-ka. Khadka taleefanka ayaa ku shaqeynaya telefoonnadii ugu dambeeyay ee xawaaraha sare ee 5G oo lagu daray taleefannada 4G ee ugu caansan. Beddelaha ATEM wuxuu si otomaatig ah u ogaan doonaa marka taleefanku ku xiran yahay oo u beddelo xiriirkiisa internetka si uu u isticmaalo, isaga oo tirtiraya baahida loo qabo beddelidda goobaha. Markii la isku xidho, taleefanku wuxuu ka xoogi doonaa dekedda USB-ga sidaa darteed weli wuxuu ku xiran yahay furaha. Adoo isticmaalaya isku xirnaanta taleefanka iyo macluumaadka moobilka, ATEM Mini Pro iyo ATEM Mini Extreme waxay noqdeen xalka ugu fiican ee soo saarida mobilada.
ATEM Mini Pro iyo moodooyinka aadka u daran waxay sidoo kale taageeraan duubista tooska ah ee xogtooda qulqulaya ilaa USB disk-yada cajaladaha. Taasi waxay ka dhigan tahay inay macaamiisha ka helayaan duubitaanno aad u dhaadheer isla H.264 faylal fiidiyoow ah oo wata AAC maqal ah oo ay macaamiishu sii daayeen, sidaa darteed macaamiisha ayaa toos ugu gudbin kara bog kasta oo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah, sida YouTube ama Vimeo. Duubista cajalado badan ayaa sidoo kale lagu taageeraa iyada oo loo marayo xarun USB ah ama Blackmagic MultiDock, markaa marka diskku buuxiyo duubista wuxuu kusii socon karaa disk labaad duubis aan joogsi lahayn. Dejinta duubista iyo xulashada diskiga ayaa lagu dejiyaa Xakamaynta Software-ka ATEM waxaana jira muuqaal xaalad rikoor ah oo ku jira aragti-isku-dhafan.
ATEM Mini Pro ISO iyo moodooyinka 'Extreme ISO' ayaa macaamiisha u oggolaanaya inay wax ka beddelaan dhacdadooda tooska ah maadaama ay duubi karaan fiidiyoowyo badan oo fiidiyoow ah, oo ay ku jiraan quudinta nadiifka ah ee dhammaan galka iyo barnaamijka, dhammaantood isla waqtigaas. Sawirada barkadaha warbaahinta ee la isticmaalo ayaa sidoo kale lagu keydiyaa faylasha fiidiyowga. Faylasha fiidiyowga waxaa ku jira astaamaha metadata sida nambar isku mid ah iyo lambarrada kamaradda. Qiyaas inaad dib-u-habeyn ku sameyso bandhigooda darajooyin midab cusub, saameyn iyo muuqaallo muuqaal ah. Xitaa ilaha maqalka dhammaantood waa la duubaa si macaamiisha ay si xirfad leh ugu shaandheyn karaan codkooda.
Moodooyinka 'ISO' waxay sidoo kale keydinayaan faylka mashruuca DaVinci Resolve, sidaa darteed hal macaamiil oo guji ayaa ku furi kara wax soo saarkooda tooska ah sida fiidiyowga wax laga beddelayo. Dhamaan jarista, kala-baxa iyo sawirada barkadaha warbaahinta ayaa la rari doonaa. Tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ay hagaajin karaan qodobbada wax ka beddelka ama xitaa gabi ahaanba beddeli karaan tallaalada. DaVinci Resolve Sync Bin wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay ku xushaan darbooyin cusub adoo adeegsanaya aragti badan si ay u fududahay in la isticmaalo. Macaamiisha xitaa waxay dib ugula xiriiri karaan feylasha kamaradaha Blackmagic RAW si loogu daro sixitaanka midabka xirfadlaha ah iyo dhameystirka HD Ultra.
Iyadoo la adeegsanayo laba qaybood oo madaxbanaan oo rikoodh ah 3.5mm, macaamiisha ayaa ku xidhi kara desktop-ka iyo makarafoonada lapel. Iyadoo la adeegsanayo 2 cod dheeri ah oo dheeri ah, macaamiisha ayaa xaqiijin kara martida iyo martida labaduba inay leeyihiin mikrofoonada dhabta ah markay wareysiyada sameynayaan. Ku darso moodellada oo dhan waxay ka muuqdaan aaladda 'Fairlight audio mixer' oo dhammaantood leh HDMI gashiga iyo gelida makarafoonka labadaba waxay kuxiran yihiin maqalka maqalka si macaamiisha ay ugu noolaan karaan iskudhafka dhamaan ilaha codka. ATEM Mini Extreme sidoo kale wuxuu ku darayaa soo saarida maqalka dhagaha.
Mid kasta oo ka mid ah HDMI Wax-soo-saarka waxay soo bandhigaan halbeeggooda u gaarka ah beddelaha. Taasi waxay ka dhigan tahay ATEM Mini wuxuu si otomaatig ah ugu beddelayaa ilaha 1080p, 1080i iyo 720p heerarka fiidiyowga switcher. The HDMI wax soo saarka waa wax soo saar run ah "aux" sidaa darteed macaamiishu way nadiifin karaan beddelaad kasta HDMI gelinta wax soo saarka. Lagu daro moodooyinka 'ATEM Mini Extreme' waxay taageeraan 2 wareegyo toosan oo qarsoodi ah. On moodooyinka ka sii awood badan ATEM Mini Pro iyo ATEM Mini Extreme, the HDMI soosaarka ayaa loo dooran karaa inuu muujiyo muuqaalka muuqaalka oo buuxa.
Barnaamijka xakamaynta softiweerka ATEM wuxuu furaa awoodda qarsoon ee ATEM Mini wuxuuna u oggolaadaa marin u helidda astaamo kasta oo furaha. Xakamaynta softiweerka ATEM wuxuu leeyahay muuqaal adeegsade beddelaha muuqaalka leh palettes-ka halbeegga ah ee sameynta hagaajinta degdegga ah. In kasta oo macaamiisha ay si caadi ah ugu xirmi karaan USB-ga, haddii macaamiisha ay ku xirmaan adoo adeegsanaya Ethernet haddana waxaa suurtagal ah in isticmaaleyaal badan ay ku xirmaan ATEM Mini iyagoo adeegsanaya nuqullo gaar ah oo ka mid ah Koontaroolka Software-ka ee ATEM ee kombiyuutarada kala duwan. Macaamiisha ayaa xitaa badbaadin kara gobolka furaha faylka XML. Haddii macaamiisha ay u baahan yihiin dib u soo celin goos goos ah, macaamiisha xitaa wey xakamayn karaan rikoodhada HyperDeck disk-yada Ethernet.
Waxaa lagu dhisay "barkadda warbaahinta" waxay u oggolaaneysaa rakibaadda illaa 20 sawirro muuqaal ah oo RGBA ah oo kala duwan oo loogu talagalay cinwaannada, taarikada furitaanka iyo astaamaha. Macaamiisha xitaa way u isticmaali karaan wali muraayadaha saamaynta adag sida masaxyada garaafka. Graphics waxaa lagu buuxin karaa iyada oo loo marayo ATEM Software Control ama si toos ah looga soo dejisan karaa Photoshop iyada oo la adeegsanayo ATEM Photoshop fur-in.
Moodooyinka 'ATEM Mini Extreme' waxaa ka mid ah 4 koronto-wadeyaal kor u kaca ah tanina waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay dhisaan noocyo casri ah oo xiiso leh. Iyada oo leh 4 keators chroma keyers oo madaxbanaan, macaamiisha waxay helayaan keyer kamaradkiiba si macaamiisha ay u dhisi karaan qaab istiraatiijiyadeed ilaa 4 kamaradood. Macaamiisha ATEM Mini Extreme waxay leeyihiin 8 gasho, 4 si loogu isticmaalo kamaradaha halka 4-ta kalena ay kuxiran karaan kumbuyuutar kumbuyuutareed aasaasi ah. Ama macaamiisha uma baahna inay dhaqaajiyaan kaamirooyinkooda, macaamiisha waxay sameyn karaan noocyo kamarad ah oo go'an iyadoo la rakibayo sawir hore oo wali laga soo qaaday ciyaartoyda warbaahinta iyo barkadda warbaahinta. Macaamiisha ayaa dejin kara macros si ay u beddelaan kamaradaha oo ay ugu dhejiyaan asalka saxda ah ciyaartoyda warbaahinta. Ama xitaa isticmaal DeckLink Quad HDMI iyo live softiweer set software.
Marka lagu daro 2 madax-bannaan oo loo yaqaan 'DVEs' oo ah qaababka 'ATEM Mini Extreme moodel', waxa kale oo jira SuperSource awood badan oo wax-soo-saarka ah oo leh 4 lakabyo dheeri ah oo loo yaqaan 'DVE' oo lagu daray lakab asal ah, dhammaantoodna u muuqda ATEM Mini Extreme oo ah ilo soo-galin dheeri ah. Soo galid kasta oo fiidiyoow ah oo ATEM Mini Extreme ah ayaa loo isticmaali karaa mid kasta oo SuperSource DVE ah, ka dibna dhammaantood waa la isku wada duubay iyada oo loo marayo asalka caadada barkadda warbaahinta. SuperSource waxay ku habboon tahay sameynta sawirro badan oo muuqaal ah oo muujinaya dadka lala wareysanayo maxaa yeelay macaamiisha ayaa dejin kara saameynta ka hor inta aysan hawada gelin, iyagoo weli sii wada ilaalinaya labada DVEs ee muhiimka u ah howlaha kale. SuperSource waxay lamid tahay haysashada lakab VFX lakabyo badan oo dheeri ah oo lagu dhex dhisay.
Markaad sameyneyso wax soo saar ballaaran oo toos ah oo leh kaamirooyin fara badan, waa wax aad u faa'iido badan in lagu arko dhammaan ilaha fiidiyowgooda isla waqtigaas hal kormeere. The ATEM Mini Pro iyo ATEM Mini Extreme moodooyinka waxaa ka mid ah aragti-xirfadeed badan oo macaamiisha u oggolaanaya inay arkaan dhammaan galka fiidiyowga, horudhac iyo barnaamij hal HDMI telefishanka ama kormeeraha. Muuqaal kasta oo kamarad ah waxaa ku jira tilmaamayaal isdaba-joog ah si markaa macaamiisha ay u ogaadaan goorta il kasta ay hawada ku jirto, aragti walbana sidoo kale waxay leedahay sumado caado ah iyo mitirro maqal ah. Lagu daro moodooyinka 'ATEM Mini Extreme' oo macaamiisha u oggolaanaya inay doortaan illaa 16 aragtiyo caado ah. Multiview xitaa waxaa ku jira xaalada duubista, qulqulka iyo maqalka maqalka.
ATEM Streaming Bridge waa beddele fiidiyoow u oggolaanaya macaamiisha inay ka helaan durdur H.264 wixii ATEM Mini Pro ama ATEM Mini Extreme ah oo dib ugu beddela SDI iyo HDMI video. Tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ay u diri karaan fiidiyoow meelaha fog fog agagaaraha shabakadooda Ethernet, ama internetka oo caalami ah. Taasi waa suurtagal sababtoo ah waxay isticmaashaa koodhadhka H.264 ee horumarsan tayada sare ee heerarka xogta aad u hooseeya. Dejintu waa fududahay maaddaama adeegga softiweerka ATEM uu abuuri karo faylal dejineed oo macaamiisha ay ugu diri karaan istuudiyo durugsan.
"Kuwani 2 moodellada cusub ee ATEM Mini waa koror ballaaran oo ku saabsan astaamaha hal-abuurka oo hadda waa kuwa noogu awoodda badan 1 M / E beddelayaal!" ayuu yiri Grant Petty, Blackmagic Design Agaasime guud. “Iyadoo macaamiisheenna ATEM Mini ay dhab ahaantii riixayaan cidhifka wax soo saarka tooska ah, waxaan dareemeynaa inay hal-abuurnimo ku sameynayaan qaabab cusub oo xiiso leh isla markaana ay ikhtiraacayaan shaqooyin cusub oo aynaan weligood horay u arag. Marka waxaan dareenay inay muhiim tahay in la dhiso qaab cusub oo ah ATEM Mini kaasoo qaadan doona astaamaha sifiican wixii ka baxsan waxa hada la heli karo, sidaa darteed macaamiisheenu waxay sii wadi karaan inay hal-abuurnimo ku sameeyaan shaqooyinkan cusub ee shaqada. Moodelladan cusubi waa kuwo waaweyn, awood badan oo haddana si la yaab leh loo awoodi karo.
ATEM Mini Extreme iyo ATEM Mini Extreme ISO Astaamaha
Waxaa ku jira qaab dhismeedka kontoroolka lagu xakameeyo miniaturized.
Waxay taageertaa isku xirida illaa iyo kaamirooyinka 8 ama kumbuyuutaro.
Waxay taageertaa qulqulka Ethernet ama taleefannada ku xiran USB.
Ku xir 5G ama 4G taleefannada loogu talagalay qulqulka moobiilka fog.
Diiwaanada kumbuyuutarka USB-ga ee H.264.
Laba qalab oo la galiyo stereo audio oo loogu talagalay in lagu xiro mikrofoonnada dhagaha la isugu adeegsado ee desktop ama lapel.
Jaangooyooyinku otomaatig ayey u beddelaan oo dib-u-dhammaystiraan dhammaantood HDMI gelinta.
Waxaa ku jira Kontoroolka Software Software ee ATEM ee Mac iyo Windows.
Saxaafadda gudaha ee sawirada '20 RGBA' ee loogu talagalay cinwaanada, taargooyinka furitaanka iyo astaamaha.
4 keydka kore ee ATEM Advanced Chroma ee shaqada shaashadda cagaaran / buluug ah.
2 DVEs madaxbanaan oo lagu daray SuperSource leh 4 DVEs dheeri ah.
16 way multiview si loola socdo dhammaan kamaradaha, duubista iyo xaaladda socodka.
Helitaanka iyo Price
ATEM Mini Extreme iyo ATEM Mini Extreme ISO ayaa hadda laga heli karaa US $ 995, marka laga reebo waajibaadka maxalliga ah iyo canshuuraha, laga bilaabo Blackmagic Design iibiyayaal caalami ah.
Sawirada alaabada ee ATEM Mini Extreme iyo ATEM Mini Extreme ISO, iyo sidoo kale dhamaan kuwa kale Blackmagic Design alaabada, ayaa laga heli karaa www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design abuuraa wax soo saarka ee ugu badan dunida tayada video tafatirka, kamaradaha film digital, correctors midabka, converters video, la socodka video, router, switchers saarka live, rikoorrada disk, kormeerayaasha waveform iyo scanners dhabta ah film waqtigii film feature, wax soo saarka post iyo baahinta telefishanka warshadaha. Blackmagic Design'S kaararka qabashada DeckLink bilaabay kacaan in tayada iyo awoodda wax soo saarka post, halka abaalmarinta Emmy ™ shirkadda ee ku guuleystay DaVinci waxyaabaha la saxo color ayaa heysatay warshadaha telefishanka iyo filimka tan 1984.
Blackmagic Design sii tabo cusub dhulka jabiyay oo ay ku jiraan 6G-SDI iyo 12G-SDI alaabta iyo 3D stereoscopic iyo HD Ultra workflows. Aasaasay by keentay post dunida tafatirayaasha-soo-saarka iyo injineerada, Blackmagic Design xafiisyo ee USA, UK, Japan, Singapore iyo Australia. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan tag www.blackmagicdesign.com.
ATEM Mini xad-dhaaf ah Blackmagic Design 2021-02-17
Previous: Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Soo Bandhige Websaydh Cusub Blackmagic HD
Next: diguise waxay taageertaa StarTracker xR